Sehatry ny fitaterana Manana anjara toerana goavana amin’ny fampandrosoana
Vondrona Eoropeanina “Efa maro ireo vola natontona ho an’i Madagasikara”
Nisy ny tatitra nataon’ny Vondrona Eoropeanina (UE) tamin’ny mpanao gazety natao tetsy amin’ny foibeny Tour Zital Ankorondano omaly.
Madagasikara sy Frantsa Famatsiam-bola miisa 4 no natao sonia
Nanome fanampiana ho fampandrosoana an’Antananarivo sy ny manodidina ny Masoivoho Frantsay ho amin’ny fampandrosoana (AFD).
Tetibolam-panjakana 2019 Raima sy valo ny fandaniana azy teny Tsimbazaza
Nolanian’ireo solombavambahoaka rehetra teny Tsimbazaza tamin’ny fomba tsotra sy maika ny sabotsy hariva teo ny Volavolan-dalàna
Ofisim-pirenen’ny fizahantany Mankalaza ny faha-15 taonany
15 taona ny nisian’ny Ofisy nasionalin’ny fizahantany eto Madagasikara (ONTM).
Fitsirihana ny orinasa QMM Manazava ny antony ny fanjakana
Nandritra ny filankevitry ny minisitra tamin’ny farany teo no nangatahan’ny fanjakana Malagasy hanaovana tsirika manokana ny kaonty sy ny fampiasam-bola ary ny fitantanana eo anivon’ny orinasa mitrandraka fasimainty Quit Madagascar Minerals (QMM).
Fampandrosoana ny firenena Tokony hianatra ny mpanao politika
Maro be ny Antoko Politika mitsangana eto Madagasikara. Mainka anefa mampahantra ny firenena ny fahabetsahan’ireny ary tsy miteraka fampandrosoana.
Madagasikara-Suisse Hiitatra amin’ny fandraharahana sy fizahantany ny fiaraha-miasa
Nametraka ny taratasy fanendrena azy hiasa eto amiistika i Chasper Sarott, ambasadaoron’ny Kaonfederasiona Soisa ho an’ny Repoblikan’i Madagasikara, izay noraisin`ny filoha Rajoelina teny amin`ny lapan`Iavoloha omaly.
Amin’ny 14 ka hatramin’ny 17 novambra ho avy izao no hanatanterahana ny fampirantiana voalohany mahakasika ny fitaterana sy ny manodidina izany hatao etsy amin’ny Zone Forello Tanjombato.
Hampiavaka ity andiany voalohany ity ny fiaraha-miasa avy hatrany amin’ny mpitandro ny filaminana izay hanao ny fitsirihana ireo tsy fanarahan-dalàna ataon’ny mpitatitra tahaka ny fandehanana mafy loatra na ny tsy fahatomombanan’ny fiara. Ankoatr’izay dia hampahafantarina ao ihany koa ny fametrahana GPS amin’ny fiara mpitatitra rehetra entina hanara-maso ny fanaovan’ireo mpitatitra sasany gaboraraka. Tahaka ny zotra D mampitohy an’Antananarivo sy Ivato izay natao filamatra, dia misy ny ezaka hanitarana sy hanohizana ny tetikasa mahakasika izany. Hampirisihina amin’ity hetsika ity ihany koa ireo mpisehatra amin’ny fitaterana mba hanaja ny rafitra tahaka ny fanarahana ny bokin’andrakitra. Tranoheva 500 eo no hanao fampirantiana ary efa maro ny mpiara-miombon’antoka avy any ivelany namaly ny antso, hoy hatrany ny tompon’andraikitra nampahafantatra izany tetsy amin’ny Hotely Le Louvre Antaninarenina. Marobe ny zavatra mila arenina eto amin’ny firenena amin’io sehatra io ary raha hay ny mifehy azy dia hisy akony mivaingana amin’ny toekarena mihitsy.
Sehatry ny fitaterana
Manana anjara toerana goavana amin’ny fampandrosoana
Amin’ny 14 ka hatramin’ny 17 novambra ho avy izao no hanatanterahana ny fampirantiana voalohany mahakasika ny fitaterana sy ny manodidina izany hatao etsy amin’ny Zone Forello Tanjombato. Hampiavaka ity andiany voalohany ity ny fiaraha-miasa avy hatrany amin’ny mpitandro ny filaminana izay hanao ny fitsirihana ireo tsy fanarahan-dalàna ataon’ny mpitatitra tahaka ny fandehanana mafy loatra na ny tsy fahatomombanan’ny fiara. Ankoatr’izay dia hampahafantarina ao ihany koa ny fametrahana GPS amin’ny fiara mpitatitra rehetra entina hanara-maso ny fanaovan’ireo mpitatitra sasany gaboraraka. Tahaka ny zotra D mampitohy an’Antananarivo sy Ivato izay natao filamatra, dia misy ny ezaka hanitarana sy hanohizana ny tetikasa mahakasika izany. Hampirisihina amin’ity hetsika ity ihany koa ireo mpisehatra amin’ny fitaterana mba hanaja ny rafitra tahaka ny fanarahana ny bokin’andrakitra. Tranoheva 500 eo no hanao fampirantiana ary efa maro ny mpiara-miombon’antoka avy any ivelany namaly ny antso, hoy hatrany ny tompon’andraikitra nampahafantatra izany tetsy amin’ny Hotely Le Louvre Antaninarenina. Marobe ny zavatra mila arenina eto amin’ny firenena amin’io sehatra io ary raha hay ny mifehy azy dia hisy akony mivaingana amin’ny toekarena mihitsy.